Abụọ Ga-enwerịrị Ngwa Twitter maka Ijikwa Ndị Na-eso | Martech Zone
Thursday, August 21, 2014 Thursday, August 21, 2014 Douglas Karr
Okwu m n'anya na Twitter yiri ka a ga-agbanyeghachi n'oge. Ọ na-egosi m na ndị otu na Twitter na-eme ihe iji nabata ndị spammers na ihe nzuzu na sistemụ ahụ na akara ntanetị twitter na-akawanye mma. N'eziokwu, mgbe anyị nwere ezigbo ndị na - eso - 30k + na @onyedikachi_ na 50k + on @IGIHE, Arụghị m ọrụ na-abawanye na obodo n'ihi na mkpọtụ bụ ntị chiri na crappy. Emegharịala m mkparịta ụka gaa na netwọk mmekọrịta ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị enwetaghị Twitter, Achọrọ m iche banyere ya dị ka bọọdụ mkpọsa obodo ebe m nwere ike ijikọ ma kparịta ụka na ndị na-ezipụ ozi. N'adịghị ka nyiwe mmekọrịta ndị ọzọ ebe m nwere ogologo mkparịta ụka, Twitter bụ nnukwu ikpo okwu maka ịchọpụta ezigbo ndụmọdụ na ọdịnaya, yana ijikọ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ dịka mụ onwe m.
Gbalia Iso anyi na Twitter
Soro @martech_zone Soro @douglaskarr Soro @dknewmedia Soro @jlisak
Ugbu a netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ juputara na mgbasa ozi na SPAM. Ọ dị ka mmelite ọ bụla m gụrụ adịghị mkpa, yabụ ana m etinye obere oge ebe ahụ na Twitter. Ka m dịghachiri njikọ m na ndị na-eso ụzọ na Twitter ma m na-achọ imeziwanye obodo na mkparịta ụka, enwere ngwa abụọ dị iche iche m na-enweghị ike ibi na-enweghị.
Gbochie Akaụntụ Twitter adịgboroja na StatusPeople
Ihe a na-akpọ nwere ike iju gị anya ndị na-egbu egbu ị na-eso na iri puku kwuru iri puku nke adịgboroja akaụntụ na-eme ka ha na-eso. Ọtụtụ sistemu akara akara anaghị echebara ihe ndị a echiche, yabụ ị nwere ike ịgbaso ndị folks na-enweghị mmetụta dị ka ọnụọgụ ndị ahụ na-egosi.
Hapụ onwe gị nke ndị na-eso ụzọ adịgboroja na-eme ka ọ bụrụ na ị ga-enweta ahụmahụ Twitter siri ike karị ma na-enyekwara aka weed akụkọ ndị a dị egwu na Twitter kpamkpam. Ka anyị niile na - egbochi akụkọ, ka mma netwọkụ! N'ihi nke a, ahụrụ m ndị ọnọdụ m n'anya Fakers App. M na-eji ya kpochapụ akaụntụ twitter nke m nke ndị na-eme mkpọtụ ma ugbu a, amalitere m ihicha ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ na akaụntụ blog anyị!
Choo ndi n’eso ozo ma hapu ndi ojo na JustUnfollow
You mara na enwere ụyọkọ ngwa ngwa Twitter n'ebe ahụ ga-eso gị iji hụ ma ọ bụrụ na ị soro azụ… ha ga-ewepụ gị ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị? Ọ bụ atụmatụ aghụghọ nke na - enyere ndị ọrụ Twitter aka ị tolite ma na - eme ka ndị na - eso ụzọ soro. JustU soro enyere gị aka ịchọta na ịmeghe akaụntụ Twitter ndị ahụ nwere emeghi ị.
Anọ m na Twitter iji hụ mmelite sitere na ndị folks na ụlọ ọrụ m yana iso ha. Otu ụzọ dị mma iji chọta akaụntụ Twitter ọhụrụ na-atọ ụtọ bụ site na iji JustU soroNjirimara ndị na-eso ụzọ. Enwere m ike ịhụ ụmụazụ nke ndị isi ụlọ ọrụ wee jiri ya JustU soro soro ha na akaụntụ m. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji wulite obodo gị nke ndị na-eso ụzọ dị mkpa!
Buru n'uche, site na ngwaọrụ abụọ a, ị ga-agbaso ma wepu onwe gị site na ịpị otu n'otu oge. Nke a nwere ike iwe iwe mana ọbụghị nsogbu ya. Twitter nyere iwu ka ikpo okwu ahụ ghara inwe nnukwu ọrụ maka ịgbaso na enweghị ịgbaso. Enwekwara Twitter kwa ụbọchị API ịgba na i nwere ike iru.
Tags: adịgboroja na-eso ụzọchọta akaụntụ twitterotu esi egbochi ndị na-eso ụzọ adịgborojaesi achọta ndị na-eso ụzọ adịgborojaesi achọta ndị na-eso twitterjustunfollowjikwaa ndị na-eso ụzọ twitterkwesiri inwe ngwaokwa mmaduTwitterngwa ngwa twittertwitter adịgboroja na-eso ụzọụmụazụ twitter
Ọkt 4, 2016 na 12:01 AM
Ndewonu! Got nwetara edemede mara mma nke na-enyere anyị aka ọkachasị ndị na-arụ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ndị a niile bụ ezigbo ngwaọrụ iji nyere aka bulie ndị na - eso ụzọ twitter gị! Jiri ngwa ọrụ akpaaka. Ha ga-azọpụta gị ọtụtụ oge. Meekwa ka tweets gị dị ka nke ị dere n’ezie. Yabụ, gbalịa ka ị ghara ịfefe tweet ọ gwụla ma ị chere na ndị na-ege gị ntị ga-enwe ezigbo mmasị na ozi ị na-tweeting banyere.